बिबाहमा छोरा मन्डपबाटै भा’गेपछी हुनेवाली बुहारी संग ससुराको बिबाह ! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /रोचक/बिबाहमा छोरा मन्डपबाटै भा’गेपछी हुनेवाली बुहारी संग ससुराको बिबाह !
एजेन्सी । भारतको बिहारमा एउटा अच’म्म लाग्दो बिबाहको घ’टना भएको छ।बिहार स्थित ६५ बर्सिय रोसन लालको बिबाब २१ बर्सिय कन्या संग हुन उनका छोराले नै बाध्य पारेका छन्।बासतबमा कुरा के रहिछ भने,रोसन लालको छोराको बिबाह सपना नामकी कन्या संग हुनेवाला थियो। बिबाहको दिनमा जन्ती कन्याको घरको ढोकामै पुगेको थियो तर रोसनको छोरा मन्डपबाट एकाएक भा’गे।
छोरा मन्डपबाट भागेपछी बुबा नै मन्डपमा बस्नु परेको थियो। कन्या पक्षले जन्ती खाले हात जादा कन्या पक्षको ब’दनामी हुने बताएपछी दुबै परिबारको इज्जत बचाउम भएपनी रोसनलाले आफै मन्डपमा बसेर हुनेवाली बुहा संग बिबाह गर्नु बाध्य हुनुपर्यो।उनको छोराको भने अर्को युबतीसंग माया बसेको थियो।त्यसैले उनी मन्डपबाट भागेका थिए।
प्रधानाध्यापक र शिक्षिकाको हेर्नै नसकिने कक्षाकोठा भित्रको अ’श्लिल भिडियो बाहिरियो
एजेन्सी । लकडाउनपछी विद्यालय खुल्न नपाउदै कक्षा कोठामा यौ’न ली’ला, सर्व’त्र भाईरल बनीरहेको यो भिडियो !! प्रेम सबैले गर्छन् । तर प्रेममा परियो भन्दैमा जहाँ पायो त्यहि मस्ती गर्न खोज्दा नम’ज्जाले ला’जम’र्दोमा परिन्छ पनि । यस्तै भएको छ एक सरकारी विद्यालयका हेड सरलाई ।यो कुनै एडल्ट फिल्मको दृ’ष्य होइन ।
यो ला’जम’र्दो भिडियो एक सरकारी स्कुलको कक्षा कोठाको हो । भिडियोमा कक्षा कोठा भित्रै प्रधानाध्यापक र एक शिक्षिका अ’श्लील ह’र्कत गरिरहेका देखिएका छन् । गुजरातको दाहोद जिल्लाको संजेली क्षेत्रको बताइएको छ । यो भिडियो कसैले पछाडिबाट खिचेर भाइरल बनाई दिएको थियो । भाइरल भिडियोको विषयमा शिक्षा अधिकारी र शिक्षा मन्त्रीसँग उजुरी गरिसकिएको बताइएको छ । भिडियो सार्वजनिक भएपछि स्थानीय आ’क्रोशित छन् !
काँग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालालाई देखियो को’रोना संक्र’मण
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा शशांक कोइरालामा संक्र’मण पुष्टि भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले आफूमा सं’क्रमण देखेको बताएका हुन्।
आफू लक्षण बिहिन रहेको भन्दै कोइरालाले चिकित्सकहरुको सल्लाह अनुसार हाल होम आइसोलेसनमा बसिरहेको बताएका छन्। कोइरालाको ह्याम्स अस्पतालमा को’भिड-१९ परीक्षण गरिएको थियो। ह्याम्सले प्रस्ट रिपोर्ट दिन नसकेपछि उनको स्वाब टेकुस्थित शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पुनः परिक्षणका लागि पठाइएको थियो।कोइराला फेसबुकमा आफूलाई कुनै स्वास्थ्य समस्य नरहेको बताए पनि उनी निकट काँग्रेस नेताले भने उनी बि’रामी परेको बताएका छन्। केही दिनबाट ज्वरोले थला परेपछि उनको स्वाब लिइएको ती नेताले बताए। कोइरालाले आफूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाहरुलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।